Arzantina: Firenena Mpandray Mpifindramonina no Sady Mpandeha Mila Ravinahitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2018 6:56 GMT
Misy ohabolana iray ao Amerika Latina, izay milaza hoe [amin'ny teny espaniôla, toy ny rohy rehetra ato anaty lahatsoratra raha tsy misy fanamarihana manokana] : «Ny Meksikàna dia taranaka avy amin'ny Azteky, Incas, Arzantina avy eny an-tsambo». Jorge Luis Borges kosa, arzantina mpanoratra, niteny hoe : «Eoropeàna teraka tany an-tsesintany ny Arzantina.»
Arzantina dia firenena naorin'ireo mpifindramonina, indrindra fa ireo eoropeàna izay nandositra ny ady sy ny mosary tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taonjato faha-XX. Nandao an'i Espaina, Italia, Frantsa, Pays de Galles ary Alemaina ry zareo, ary nipetraka taminà firenena iray midadasika sy manankarena, feno fahafaha-manao zavatra marobe. Ny vokatr'io fifindràmonina io dia vahoaka iray mitahiry ny fahatsiarovany ny firenena nilaozany, ary tsy manana fomban-drazana iraisany.
Sarivongan'ilay mpifindramonina Rosario, ao Arzantina. Sary nopihan'i Pablo David Flores ary nampiasàna lisansa Creative Commons.
Nanomboka nitondra mpifindramonina vaovao ireo taompolo telo farany tamin'iny taonjato lasa iny : tamin'ity indray mitoraka ity dia avy amin'ireo firenena manodidina, fa nisy koa avy any Korea, Japàna, ary taty aoriana kely, avy any Okraina. Ny toedraharaha ara-toekarena tany amin'ireo firenena toa an'i Pero, Paragoay sy Bolivia dia nanosika ireo mponina tany aminy hitady fepetram-piainana tsaratsara kokoa any amin'ny firenena iray miroborobo haingana, raha oharina amin'ireo ao amin'ny faritra.
Nandritra ny andian-taona 70, fitondrana notarihan'ny tafika no nifehy an'i Arzantina[fr]. Araka izany, voatery nisafidy ireo manampahaizana maro sy ireo mpikatroka, na hiaina an-tsesintany na ny fahafatesana. Nilefa ry zareo, nanitatra araka izany ny habaka ara-kolontsaina [arzantina] tany Eoropa. Tao anatin'ny taonjato vaovao, taorian'ny olana politika sy toekarena tamin'ny 2001 [fr], betsaka ireo tanora nibosesika tao Ezeiza, seranam-piaramanidina iraisampirenena ao Buenos Aires, nanao veloma farany teo am-panofisana fiainana vaovao, any an-kafa. Tao anaty sangodingodina, nankany Eoropa ireo Arzantina, avy eo niverina tany amin'ny tany niavian'ireo ray aman-dreniben-dry zareo.
Na izany aza, ho an'ireo rehetra mpifindra monina, tsy nitovy ny fahatsapàna ny fiverenana tany Eoropa : ny lokon'ny hoditra, ny lantompeo, ny fomba ary ny fahaizan'izy ireo miditra ho isan'ny fiarahamonina ao anatin'ny tontolo vaovao misy azy ireo, dia samy singa mamaritra ny fandraisana azy ireo any amin'ny firenena iray vaovao. Indraindray tena voamarika be mihitsy ny tsy fitovian'ny hoe Arzantina nekena any ivelany sy ny faneken'ny Arzantina ireo vahiny tonga hiara-monina aminy any amin'ny tanin-dry zareo. Araka ny soratan’ilay espaniôla mpaneho hevitra ao amin'ny bilaogy Vagonettas :
Toy ny tsy misy ny olana amin'ny fidiran'ireo teratany arzantina aty amin'ny firenenay, afa-tsy ny maha-ohatra ratsy azy ireo, satria i Arzantina hatrizay ka hatramin'izao dia mijanona foana ho firenena iray tian'ny Espaniôla tsara (izay tsy midika hoe hàlan-dry zareo ny hafa, fa fotsiny misy firenena izay tiana kokoa noho ny hafa).
Indraindray, miaina ny korontana ambony ambany amin'ny fiainana ao Arzantina ireo hafa mpifindramonina avy any Amerika Latina. Ny bilaogy iraisana Somos Paraguayos dia manangona ireo tantaran'ny Paragoaiàna any ivelany, ary ny ampahany natokana ho an'ireo monina ao Arzantina dia manasongadina ny alahelon-dry zareo ny fireneny, ny tantaran'ny fahasarotan'ny fidirana ho isan'ny fiarahamonina, ary koa ny fankasitrahany noho ireo vintana sy fahafahamanao samihafa. Izany ohatra no anoratan'i Wilson Jacquet hoe : «Misaotra, ry Arzantina», ary itantarany ny fifindramonina nataon'ny fianakaviany, sy ny hoe vitany ankehitriny ny fianarany, efa manambady izy, ary tsy ho ela dia hiteraka zaza iray.
Shiliana mpanao gazety monina sy miasa ao Buenos Aires i Juan Pablo Meneses. Ao amin'ny bilaoginy, Cronicas Argentinas, nanokana andian-dahatsoratra izy hamariparitany ny endriky ny fiainana ankehitriny lalovan'ireo mpifindramonina toa azy ao amin'io firenena io. Manoratra izy :
Misy ny taranak'ireo mpifindramonina tonga tamin'ny sambo tao Arzantina, izay, matetika, mahatsiaro amim-pireharehàna ity Arzantina natsangan'ny raibe sy renibeny ity. Nisy ireo nandao ny firenena tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa sy milaza fa sambatra tamin'ny dia nataony ary manome toky ny tsy hiverin-dàlana intsony. Tondroin-dry zareo ho làlan-tokana hivoahana i Ezeiza. Misy ireo mpifindramonina avy amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina, ireo ho vitsy an'isa atsy ho atsy ao Arzantina, izay miha-matanjaka eo ambanin'ireo kiana miraradraraka. Misy ireo milaza fa firenena malala-tànana i Arzantina, ary ireo izay manohitra mafy an'izay filazàna izay. Efa saika ho ny ankamaroan'izy rehetra.
Ny fahasamihafàn'ireo zavatra niainana sy ny toerana niavian'ireo mpifindramonina amin'izao fotoana izao dia miteraka zavamisy saro-bahàna izay manahirana ny mandray azy ao anaty firenena iray tsy mitsahatra miovaova firafitra. Raha miha-mahazo vàhana ao anatin'ny tontolo ankehitriny ny resaka fifindramonina, atsy ho atsy i Arzantina dia tsy maintsy hiatrika ny zavamisy hoe izy dia firenena iray, ary hijanona ho izay mandrakariva, naorin'ireo lehilahy sy vehivavy te-hipetraka any aminà firenena iray vaovao. Ny fahatakarana ny lasa samihafan'ireo mpifindramonina dia hanampy amin'ny fanorenana firenena iray tsy mivaky, na eo aza ny sakana, sy noho ny fananan-karena ateraky ny hamaroan'ireo kolontsaina marolafy.